हाईडोको ४ करोडको आईपिओ खुलेको थाहा पाउनुभयो ? हेर्नुस आवेदन दिने स्थानहरु — Arthatantra.com
Arthatantra.com > उर्जा > हाईडोको ४ करोडको आईपिओ खुलेको थाहा पाउनुभयो ? हेर्नुस आवेदन दिने स्थानहरु
हाईडोको ४ करोडको आईपिओ खुलेको थाहा पाउनुभयो ? हेर्नुस आवेदन दिने स्थानहरु
राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेडले आयोजना प्रभावित लमजुङ बासीका लागि साधारण सेयर (आईपिओ) निष्काशन गरेको छ । कम्पनीले एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा चार करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको चार लाख १० हजार कित्ता साधारण सेयर सोमबार (वैशाख ४ गते)देखि निष्काशन गरेको हो ।
विक्री खुला गरिएको सेयरमध्ये अति प्रभावित साबिक घेर्मु गाबिस वडा नम्बर ५ का बासिन्दालाई ६० प्रतिशतले हुन आउने दुई लाख ४६ हजार कित्ता र बाँकी न्युन प्रभावित क्षेत्र साबिक ताघ्रिङ्ग गाबिसका लागि एक लाख ६४ हजार कित्ता सेयर छुट्याइएको छ ।
कम्पनीको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेष्ट लिमिटेड रहेको छ । उक्त सेयरमा छिटोमा वैशाख १९ गते तथा ढिलोमा जेठ २ गतेसम्म आवेदन गर्न पाइने छ । कम्पनीको सेयरमा न्यूनतम ५० कित्तादेखि चार हजार कित्तासम्म आवेदन गर्न पाइनेछ ।
नविल बैंक, ओम डेभलपमेन्ट बैंक र कैलाश विकास बैंकमा लमजुङ शाखा तथा लमजुङको घेर्मुस्थित राधी हाइड्रोको पावर स्टेशनबाट सेयरमा आवेदन दिन सकिनेछ ।
कम्पनीले कुल १० करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको दश लाख २५ हजार कित्ता साधारण सेयर जारी गर्नेछ । जसमध्ये, आयोजना प्रभावित लमजुङ बासीका लागि चार लाख १० हजार कित्ता सेयरमा अहिले आवेदन खुला गरिएको छ । यो सेयरको बाँडफाँड भएपछि कम्पनीले बाँकी छ लाख १५ हजार कित्ता सेयर निष्काशन गर्नेछ ।
६० करोड रुपैयाँमा सम्पन्न भएको राधी विद्युत् कम्पनीमा बैंक अफ काठमाडौको नेर्तृत्वमा सानिमा, ग्लोबल आईएमई, कुमारी र जनता बैंकले संयुक्त रुपमा ऋण लगानी गरेका छन् । कम्पनीले घोर्मु गाविस ३ लमजुङमा राधी खोलाको पानी उपयोग गरी ४.४ मेगावाट क्षमताको राधी साना जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेको छ । साथै कम्पनीले २०७१ साल जेठ ३१ गतेबाट व्यापारिक रुपमा नै विद्युत्त उत्पादन सुरु गरी राष्ट्रिय ग्रीडमा बिक्री समेत गरिरहेको छ । साथै कम्पनीेले दोलखामा निर्माण हुन लागेको ११ मेगावाटको तल्लो खारे खोला जलविद्युत आयोजनामा पनि लगानी गरेको छ ।
२०७४ वैशाख ५ गते १३:५५ मा प्रकाशित
राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा रेग्‍मी नियुक्त, माओवादी कोटामा डा.पौडेललाई निरन्तरता
७ सय म्यानपावरले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको विवरण बुझाए, अब छानबीन कसरी होला ?
साधारण सेयरबारे तपाईलाई कति थाहा छ ? हेर्नुहोस् जान्नुपर्ने केहि टिप्स !